သဘင်သည်တွေရဲ့ဘဝကို ထင်ဟပ်ပြသနေတဲ့ စာအုပ် (၂)အုပ် - For her Myanmar
တစ်ခေတ်တစ်ခါက အငြိမ့်မင်းသမီးလေးတွေဘဝက ဘယ်လိုမျိုးလည်းဆိုတော့ ….
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အဆိုအကသဘင်ပညာရပ်ဟာ ယနေ့ခေတ်အထိ အတန်အသင့် နှစ်သက်လက်ခံသူရှိနေဆဲ အနုပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သဘင်ပညာရှင်၊ ဇာတ်၊ အငြိမ့် ပညာရှင်တွေရဲ့ ဘဝတွေ၊ သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေ၊ နောက်ပြီးသူတို့တွေဟာ လူထဲကလူတွေပဲမို့ အမှားတွေလုပ်မိတဲ့အခါ၊ အကျင့်ပျက်ယွင်းမှုတွေရှိတဲ့အခါ သူတို့ကြောင့် သဘင်လောကကြီးချို့ယွင်းလာရပုံတွေ၊ ဆုတ်ယုတ်နေတဲ့ သဘင်လောကထဲမှာ အဆိုအကအနုပညာတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားနေဆဲ သဘင်ပညာရှင်တွေ ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကို ပုံဖော်ထားတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ လက်ရာကောင်းစာအုပ်အချို့ကို ညွှန်းဆိုပေးချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ညွှန်းဆိုချင်တဲ့စာအုပ်အမည်က ဆရာမကြီး ကြည်အေးရဲ့ဂန္တဝင်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ “ကျွန်မ ပညာသည်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါပဲ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ အဓိကဇာတ်ဆောင်ဟာ “မြကြိုင်” ဆိုတဲ့အငြိမ့် မင်းသမီးငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မိခင်ဟာ တစ်ချိန်က အငြိမ့်နဲ့ဇာတ်သဘင်လောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးရိုးကောင်းတဲ့ မြကြိုင်ဟာအနုပညာလောကထဲ ဝင်ခဲ့ရာမှာတော့ မိခင်ခြေရာနင်းပြီးပါရမီရှိသူလေးဖြစ်၊ ကြိုးစားသူလေးလည်းဖြစ်လို့ ပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက်ရခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်း သူမတို့အငြိမ့်ထဲက ဂီတပညာသည် ကိုနန္ဒနဲ့လည်း ချစ်ကြိုးသွယ်မိပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘင်လောကဆိုတာ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ တောနက်လို ခြေလှမ်းတစ်ချက်မှားရင် စားဖို့ဝါးဖို့စောင့်နေသူတွေကလည်း အဆင်သင့်ပါ။
ဒီလို သဘင်လောကမှာ မိခင်လို လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ချင်တဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အငြိမ့်စင်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ မြကြိုင်တစ်ယောက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သဘင်သည်ဘဝနဲ့ ရပ်တည်နိုင်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် လိုချင်တာရဖို့ကြိုးစားရင်း အကျင့်ပျက်ယွင်းတဲ့ အနုပညာသည်ဘဝကိုပဲရမှာလား ဆိုတာကိုတော့ ဆရာမကြီးကြည်အေးရဲ့ “ကျွန်မပညာသည်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်နော်။
နောက်ထပ်တစ်အုပ်ကတော့ ဆရာမခင်ခင်ထူးရဲ့ “တောမင်းသမီး” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ဒီစာအုပ်ကိုရေးဖို့ ဆရာမခင်ခင်ထူးက အထူးအားထုတ်ခဲ့သလို ဖတ်ရှူရတာတကယ်တန်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲ ဆရာမအထူးရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကတော့ တောနယ်တစ်ခွင်မှာကပြဖျော်ဖြေကြတဲ့ အငြိမ့်မင်းသမီးလေးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ခင်ထူး – တောမင်းသမီး
ဒီဝတ္ထုဟာ ဝတ္ထုရှည်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်ယောင်းတို့ကို ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းတော့မပြောပြတော့ဘူးနော်။ အမြည်းအနေနဲ့ ပြောပြရရင်တော့
မွေးစားမိခင်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကြောင့် ကြီးပြင်းလာတဲ့ ဥသြသံအေး ခေါ် ဝါဆိုမိုး …
ငယ်စဉ်ကတည်းက အဆိုအကဝါသနာပါလွန်းလို့ အငြိမ့်မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့ ဝါဆိုမိုး …
ဝါဆိုမိုးတစ်ယောက် သူဝါသနာပါရာ သဘင်လောကမှာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အခက်အခဲတွေတွေ့ရမှာလဲ၊ သူ့ရဲ့မိခင်ရင်းနဲ့ရော ဆုံဆည်းရမှာလား ဒါတွေကိုသိချင်ရင်တော့ ဆရာမ ခင်ခင်ထူးရဲ့ “တောမင်းသမီး” ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ယောင်းတို့ရဲ့ ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ သဘင်သည်အငြိမ့်မင်းသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝကို လေ့လာနိုင်ဖို့ စာရေးဆရာမကြီးတွေရဲ့ လက်ရာကောင်းစာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ညွှန်းဆိုပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
တဈခတျေတဈခါက အငွိမျ့မငျးသမီးလေးတှဘေဝက ဘယျလိုမြိုးလညျးဆိုတော့ ….
မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ အဆိုအကသဘငျပညာရပျဟာ ယနခေ့တျေအထိ အတနျအသငျ့ နှဈသကျလကျခံသူရှိနဆေဲ အနုပညာတဈရပျဖွဈပါတယျ။ သဘငျပညာရှငျ၊ ဇာတျ၊ အငွိမျ့ ပညာရှငျတှရေဲ့ ဘဝတှေ၊ သူတို့ရဲ့အခကျအခဲတှေ၊ နောကျပွီးသူတို့တှဟော လူထဲကလူတှပေဲမို့ အမှားတှလေုပျမိတဲ့အခါ၊ အကငျြ့ပကျြယှငျးမှုတှရှေိတဲ့အခါ သူတို့ကွောငျ့ သဘငျလောကကွီးခြို့ယှငျးလာရပုံတှေ၊ ဆုတျယုတျနတေဲ့ သဘငျလောကထဲမှာ အဆိုအကအနုပညာတှကေို ထိနျးသိမျးဖို့ကွိုးစားနဆေဲ သဘငျပညာရှငျတှေ ဒီလိုအကွောငျးအရာတှကေို ပုံဖျောထားတဲ့ စာရေးဆရာတှရေဲ့ လကျရာကောငျးစာအုပျအခြို့ကို ညှနျးဆိုပေးခငျြပါတယျ။
ပထမဆုံး ညှနျးဆိုခငျြတဲ့စာအုပျအမညျက ဆရာမကွီး ကွညျအေးရဲ့ဂန်တဝငျစာအုပျတဈအုပျဖွဈတဲ့ “ကြှနျမ ပညာသညျ” ဆိုတဲ့ စာအုပျပါပဲ။
ဒီဇာတျလမျးမှာတော့ အဓိကဇာတျဆောငျဟာ “မွကွိုငျ” ဆိုတဲ့အငွိမျ့ မငျးသမီးငယျလေးဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့မိခငျဟာ တဈခြိနျက အငွိမျ့နဲ့ဇာတျသဘငျလောကမှာ လြှမျးလြှမျးတောကျနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ မငျးသမီးကွီးတဈဦးဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးရိုးကောငျးတဲ့ မွကွိုငျဟာအနုပညာလောကထဲ ဝငျခဲ့ရာမှာတော့ မိခငျခွရောနငျးပွီးပါရမီရှိသူလေးဖွဈ၊ ကွိုးစားသူလေးလညျးဖွဈလို့ ပရိသတျခဈြခငျအားပေးမှုကို တဈခဲနကျရခဲ့ပါတယျ။
တဈခြိနျတညျး သူမတို့အငွိမျ့ထဲက ဂီတပညာသညျ ကိုနန်ဒနဲ့လညျး ခဈြကွိုးသှယျမိပါတော့တယျ။ ဒါပမေဲ့ သဘငျလောကဆိုတာ အန်တရာယျကွီးတဲ့ တောနကျလို ခွလှေမျးတဈခကျြမှားရငျ စားဖို့ဝါးဖို့စောငျ့နသေူတှကေလညျး အဆငျသငျ့ပါ။
ဒီလို သဘငျလောကမှာ မိခငျလို လြှမျးလြှမျးတောကျအောငျမွငျခငျြတဲ့၊ ကိုယျပိုငျအငွိမျ့စငျတဈခုကိုပိုငျဆိုငျရမယျဆိုပွီး ရညျမှနျးခကျြကွီးတဲ့ မွကွိုငျတဈယောကျ ဂုဏျသိက်ခာရှိတဲ့သဘငျသညျဘဝနဲ့ ရပျတညျနိုငျမှာလား၊ ဒါမှမဟုတျ လိုခငျြတာရဖို့ကွိုးစားရငျး အကငျြ့ပကျြယှငျးတဲ့ အနုပညာသညျဘဝကိုပဲရမှာလား ဆိုတာကိုတော့ ဆရာမကွီးကွညျအေးရဲ့ “ကြှနျမပညာသညျ” ဆိုတဲ့ စာအုပျထဲမှာဖတျရှူနိုငျပါတယျနျော။
နောကျထပျတဈအုပျကတော့ ဆရာမခငျခငျထူးရဲ့ “တောမငျးသမီး” ဆိုတဲ့ စာအုပျပါ။ ဒီစာအုပျကိုရေးဖို့ ဆရာမခငျခငျထူးက အထူးအားထုတျခဲ့သလို ဖတျရှူရတာတကယျတနျတဲ့ စာအုပျကောငျးတဈအုပျဖွဈပါတယျ။ နာမညျနဲ့လိုကျအောငျပဲ ဆရာမအထူးရေးဖှဲ့ထားတဲ့ ဇာတျကောငျတှကေတော့ တောနယျတဈခှငျမှာကပွဖြျောဖွကွေတဲ့ အငွိမျ့မငျးသမီးလေးတှအေကွောငျးဖွဈပါတယျ။
ခငျခငျထူး – တောမငျးသမီး
ဒီဝတ်ထုဟာ ဝတ်ထုရှညျကွီးဖွဈတာကွောငျ့ယောငျးတို့ကို ဇာတျလမျးအကဉျြးတော့မပွောပွတော့ဘူးနျော။ အမွညျးအနနေဲ့ ပွောပွရရငျတော့
မှေးစားမိခငျရဲ့စောငျ့ရှောကျမှုကွောငျ့ ကွီးပွငျးလာတဲ့ ဥသွသံအေး ချေါ ဝါဆိုမိုး …
ငယျစဉျကတညျးက အဆိုအကဝါသနာပါလှနျးလို့ အငွိမျ့မငျးသမီးဖွဈလာတဲ့ ဝါဆိုမိုး …
ဝါဆိုမိုးတဈယောကျ သူဝါသနာပါရာ သဘငျလောကမှာ ဘယျလိုဘယျပုံ အခကျအခဲတှတှေရေ့မှာလဲ၊ သူ့ရဲ့မိခငျရငျးနဲ့ရော ဆုံဆညျးရမှာလား ဒါတှကေိုသိခငျြရငျတော့ ဆရာမ ခငျခငျထူးရဲ့ “တောမငျးသမီး” ဆိုတဲ့ စာအုပျမှာ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
ယောငျးတို့ရဲ့ ဒီတဈပတျပိတျရကျမှာ သဘငျသညျအငွိမျ့မငျးသမီးလေးတှရေဲ့ဘဝကို လလေ့ာနိုငျဖို့ စာရေးဆရာမကွီးတှရေဲ့ လကျရာကောငျးစာအုပျနှဈအုပျကို ညှနျးဆိုပေးလိုကျရပါတယျနျော။
Tags: Book review, Career, Entertainment, Knowledge, women